Big City Small World (Series3Episode6- I'm In!) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on August 21, 2013 at 11:13 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series3Episode6- I'm In! (အတွဲ (၃) အပိုင်း (၆) - ငါလဲပါမယ်)
ဂျော်နီသည် ချမ်းသာဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအိပ်မက်မက်နေလေ့ရှိသည်။ ဒါကြောင့် ဖာဒီ၏ စိတ်ကူးကြီးက သူ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။ ဖာဒီ၏စီးပွားရေးအကြံက ဘာပါလိမ့်။ သူတို့တွေကို ချမ်းသာစေနိုင်ပါ့မလား။
Series3Episode6- I'm In! ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
အင်း အခုအတိုင်းဆိုရင်တော့ ငါက ကော်ဖီဆိုင်ရဲ့ စားဖိုမှူးနဲ့ တွဲနေရတာမျိုးပေ့ါ။
အိုး..ဆာရာ လုပ်စမ်းပါ။ ဒီနေရာကကောင်းပါတယ်။ ကားလို့စ်က တိုနီနေမကောင်းတုန်း ခဏ၀င်ကူပေးတာပါ။
အင်း ဟုတ်မှာပါလေ။ ဒါပေမယ့် ဒါဂုဏ်ရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့ မဟုတ်ဘူးမလား။
ဆာရာကသူ့ရည်းစား ကော်ဖီဆိုင်မှာ စားဖိုမှူးလုပ်နေလို့မပျော်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
အိုး အိုလီဗီယာရယ်။ သူကကူညီနေယုံသက်သက်ပဲဟာ။ ဒါ ဘယ်လောက်စိတ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုတာ သိရတာပေါ့။
အဲ . . .အင်း . . ဟုတ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကားလို့စ်က အမေရိကန်တောင်ပိုင်းအစားအစာတွေရောင်းတဲ့ ကိုယ်ပိုင် အဆင့်မြင့်မြင့် အကောင်းစား စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့အကြောင်းအမြဲပြောနေတာ။
အင်း သူဒါကိုနောက်ဆုံးမှာ လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်မှာသေချာပါတယ်။
အေး သူလုပ်မှာပါ။ ဒီမှာအတွေ့အကြုံလေးပိုရအောင် လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါဟာ။
အေးပါ။ ဟုတ်ပါပြီ။ ကြည့်ကြတာပေါ့။
တော်တော်ယုံတာပဲ။ လုပ်ပါ နားလေးတော့ထောင်ပါဦး။
နင်တို့အတွက် ဖာဒီ့မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆိုတစ်ခု ရှိတယ်။
အေးဟုတ်တယ်။ နင်တို့မငြင်းနိုင်လောက်မယ့် ကမ်းလှမ်းချက်ပဲ။
အင်း တို့တွေဟာအမျိုးမျိုးရောထားတဲ့အုပ်စုတစ်ခုဆိုတော့ . . .
သြော် . . . အင်္ဂလိပ်။ တရုတ်။ ပိုလန်လူမျိုး။ ဘရာဇီးလူမျိုး။ လက်ဘနွန်လူမျိုး . . .
ငါတို့ ဒီမြို့ကိုလာတဲ့ ဧည့်သည်တွေ၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေအတွက် ၀န်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကုမ္ပဏီ “FindLondon” ထောင်လို့ရတယ်လို့တွေးမိတယ်။
အကုန်လုံးပေါ့ကွာ . . . စကားပြန်မယ်။ နေစရာရှာပေးမယ်။ စားလို့ကောင်းမယ့် နေရာတွေ၊ လေ့လာရမယ့် နေရာတွေ . . . ခရီးသွားလမ်းညွှန် . . . အဲဒါမျိုးတွေပေါ့။
ဒီအကြံမဆိုးပါဘူး။ ငါတို့သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေ သုံးမယ်ဆိုရင် ဥပမာ . . .
ငါလောလောဆယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အသေးစားလေးတွေ ရှာနေတယ်။ နောက်တစ်ပတ်မှာ အစည်းအဝေးလုပ်မယ်။ မင်းတို့ပါမလား။
အဲ အခုတောင်မှာ ငါ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးနဲ့လုံးချာလိုက်နေတာ . . . ငါ့ကိုထည့်မတွက်နဲ့။
အေး ကံကောင်းပါစေသူငယ်ချင်းတို့။ ငါနဲ့လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။
မင်းတို့နောင်တရမယ်။ တို့တွေ သန်းကြွယ်သူဌေးတွေဖြစ်ဦးမှာ။